Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ Barbados » Njem nlegharị anya Barbados na -ebubata ọnụ ọgụgụ ndị rutere na July
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Barbados nwere, ma na-aga n'ihu ihu igwe oke ikuku COVID-19, mana ka oge a siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ, BTMI nwere obi ụtọ ịhụ na-eto nke ọma na nso nso a.
Ndị njem ụgbọ elu 10,000 ruru Barbados.
Industrylọ ọrụ njem nlegharị anya Barbados na -edekọ ihe omume njem dị mkpa na July.
Njem nlegharị anya Barbados na -ahụ mgbanwe dị mma maka ụlọ ọrụ tupu oge oyi 2021/2022.
Barbados dekọrọ ihe karịrị ndị njem ụgbọ elu 10,000 bịarutere mgbe ọnwa nke ọrịa zuru ụwa ọnụ merụrụ ahụ nke ukwuu. Maka oge mbụ kemgbe ọnwa Disemba 2020, ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya mpaghara dekọrọ nnukwu njem nlegharị anya na ọnụ ọgụgụ kachasị ọhụrụ sitere na Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) na -atụ aro mgbanwe dị mma maka ụlọ ọrụ ahụ tupu oge oyi 2021/2022.
N'ime oge July 2021, ihe dị ka ndị ọbịa 10,819 gara Barbados. Mkpokọta a nọchiri anya mmụba dị ukwuu nke ndị ọbịa 6,745 ma e jiri ya tụnyere oge kwekọrọ na July 2020.
United States (US) pụtara nke ọma ka ha meriri pasent 43.3%, ebe United Kingdom (UK) nyere 34.4% azụmaahịa yana ndị bịarutere 3,722 maka oge mkpesa. Nke a mere mgbe agbakwunyere Barbados na ndepụta nlele akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ UK COVID-19. Barbados nwere ihe ndabara ọma itinye ya na listi a nke ugboro abụọ kemgbe mmalite oria ojoo COVID-19.
Maka otu oge ahụ, ọnụ ọgụgụ mbata ndị Caribbean guzo na 1,391 na 390 si Canada bịa. Nke a na -anọchite anya mmụba nke ndị si n'ahịa abụọ ahụ rute n'afọ n'afọ.
Onye isi oche oge Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) , Craig Hinds, kọwara nmeri a dị ka nzọ ụkwụ n'ụzọ ziri ezi mgbe ike na-adịghị agwụ ike, na-apụ ma na-apụ apụ, iji rụzigharịa ngwaahịa ndị njem.
O kwuru na “Barbados nwere, ma na-aga n'ihu na-enwe oke ikuku nke COVID-19, mana ka oge a siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ, BTMI nwere obi ụtọ ịhụ na-eto nke ọma na nso nso a. Uto a bụ nsonaazụ sitere na ọmarịcha ahịa na ịre ahịa n'ahịa anyị dị na mba ofesi site na mkpọsa dị ka nkwalite "Ntọala Oge Ọchịchịrị", yana ijigide mmekọrịta siri ike na ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị njem na ndị njem. "
Na July, BTMI jikọtara Resortlọ Ahịa Sandal ka ha wetara ụlọ ọrụ redio United States iri na ise site na obodo iri na otu na Barbados iji nye ndị na-ege ntị ohere imeri ezumike abalị anọ/abalị atọ na Sandals Resort na Barbados. Ụlọ ọrụ redio na -agbasa ozi site na Akpụkpọ ụkwụ Royal Barbados tinyere ndị ọrụ nlegharị anya nke Sen. Hon. Lisa Cummins, onye minista njem na njem mba ofesi. Nkwalite ahụ, nke ndị ụgbọ elu America kwadoro, ruru ihe karịrị 4,000,000+ ndị na -ege ntị.
MAMERITO SSENFUMA ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 23, 2021 na 20:20
Emere njem nlegharị anya otu Barbados nke ọma maka nnukwu ọrụ. imekọ ihe ọnụ, ịhazi na imekọ ihe ọnụ yana ijigide mmekorita siri ike na ndị mmekọ njem niile ga-abụ ihe dị mkpa n'ịkwalite ebe ndị njem nlegharị anya mgbe ọrịa Covid-19 gasịrị.